သူငယ်ချင်းနည်းနည်းကိုသာ ပေါင်းတတ်သူလား? အပေါင်းအသင်းမင်သူလား? ဆန်းစစ် ကြည့်ရအောင်… ~ ITmanHOME
01:32 ကောင်းနိုးရာရာ No comments
သူငယ်ချင်းနည်းနည်းကိုသာ ပေါင်းတတ်သူလား? အပေါင်းအသင်းမင်သူလား? ဆန်းစစ် ကြည့်ရအောင်…
သင့်မှာ သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးရှိလား။ သူငယ်ချင်းနည်းနည်းကိုသာ ပေါင်းတတ်သူလား။ သင်က သူငယ်ချင်းတွေကို လိုက်ပေါင်းရသလား။ သူငယ်ချင်းတွေက သင့်ကို လိုက်ပေါင်းရတာလားဆိုတာ ဆန်းစစ် ကြည့်ရအောင်…။
သင်ဟာ သင့်နားမှာ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေ ပေါများနေမှ နေပျော်တတ်သူပါ။ အပေါင်းအသင်း အရမ်းမင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်း မနေတတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်ရင်တောင် အွန်လိုင်း ပေါ်တက်ကာ Facebook သုံးခြင်း၊ Chatting ဝင်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။ လူဆိုတာ တစ်ယောက်တည်း နေရချိန်တွေ ရှိပါတယ်။ အမြဲတမ်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ဟေးလား ဝါးလား လုပ်နေလို့ မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် တစ်ခါတလေ ဘယ်သူနဲ့မှ မဆက်သွယ်ဘဲ တစ်ယောက်တည်းနေကြည့်ပါ။ သင့်သူငယ်ချင်းတွေကို အရေးထားသလို သင့်ကိုယ်သင်လည်း အလေးတတ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ သူငယ်ချင်းစကားနားယောင်လေ့ရှိတာကြောင့် အပေါင်းအသင်းမမှားအောင် သတိထားဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
အခြေအနေအချိန်အခါအလိုက် နေထိုင်တတ်သူ ပါ
သင်ဟာ သူငယ်ချင်းတွေက မုန့်သွားစားကြမယ်ဟေ့ဆိုရင်လည်း ပိုက်ဆံအိတ် အသင့်ကိုင်ပြီး လိုက်ဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။ တစ်ယောက်တည်း အိမ်စောင့်နေရမယ်ဆိုလည်း ပျော်ပျော်ကြီးပါပဲ။ သူငယ်ချင်းတွေကိုခင်ပေမယ့် သူတို့မရှိရင် မနေတတ် တဲ့သူမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးလည်း မပေါင်းတတ်ဘူး။ ရှိတဲ့သူငယ်ချင်းကိုသာ အတွင်း ကျကျ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပေါင်းတတ်တယ်။ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းတချို့နဲ့သာ ပေါင်းသင်းလေ့ရှိသူပါ။
သင်ဟာ ကံကောင်းပါတယ်။ သင့်မှာ အလိုလိုနေရင်း ခင်ချင်သူတွေ၊ ပေါင်းချင်သူတွေ များနေတတ်ပါတယ်။ သင်ဟာ လူ အများကြားမှာ ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေကာ လူတွေအပေါ် သြဇာရှိသူပါ။ သင် သဘောကျသည်ဖြစ်စေ၊ မကျသည်ဖြစ်စေ သင့်ကို ခေါင်းဆောင်နေရာမှာ ထားတတ်ကြပါတယ်။ လူတွေအများကြီးနဲ့ဆက်ဆံရလို့ တစ်ခါတလေ စိတ်ကုန်နေတတ်ပါတယ်။ စိတ်မကျဉ်းကျပ်ရလေအောင် တစ်ခါတလေ ဖုန်းတွေပိတ်ထားပြီး နေလိုက်ပါ။
credit De lo De lo